Ambohitrimanjaka sy ny fanatanterahana ny tetikasa Tana-Masoandro avy hatrany no mby tao an-tsain’ny maro vao nandre omaly ny namoronana ministera iray misahana ny tanàna vaovao sy ny toeram- ponenana, ka nanendrena an’i Zasy Angelo, hitantana an’izany ministera izany. Nahitsy ny tenin’ny filoha Andry Rajoelina nandritra ny filankevitry ny minisitra voalohany omaly, andro nananganana ny governemanta faharoa hanatanteraka ny IEM, fa matoa natao mitokana ny minisitra lefitra misahana ny fanorenana tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana dia ilaina ny fanafainganana sy ny fandrindrana ny asa ho haingana kokoa ary mila vokatra mivaingana.
Tontosa androany maraina ny famindram-pahefana teo amin’ny praiminisitra lehiben’ny governemanta, sady nisahana vonjimaika ny asa aman’andraikitry ny Minisitry ny Raharaham-bahiny sy ny lehiben’ny diplaomasia malagasy vaovao, Dr Tehindrazanarivelo Djacoba Liva. Naneho ny fahovononany amin’ny hanamafisana orina ny diplaomasia Malagasy ka nanamafy fa tsy handraraka ilo mby an-doha amin’ny andraikitra ankinina aminy Dr Tehindrazanarivelo, ary nankasitraka ny Praiminisitra tamin’ny fitantanana ny ministera.
lundi, 27 janvier 2020 20:21
Hery Vaovao ho an'i Madagasikara: « Tsy hangina ny antoko manoloana ny toe-draharahampirenena »
« Tsy hangina ny antoko manoloana ny toe-draharahampirenena ary hamoaka rahateo angon’atontan-taratasy maneho ny tsy fanarahan-dalàna nisy teto amin’ny firenena nanomboka ny 18 Janoary 2019 ». Nambaran’ny Mpandrindra Nasionalin’ny antoko, Rivo Rakotovao, io nandritra ny fifampiarahabana nahatratra ny taona vaovao 2020 nataon’ireo mpikambana eo anivon’ny antoko Hery Vaovao ho an'i Madagasikara (HVM) izay notanterahina teny Ambohimalaza-Antananarivo Avaradrano.
Nanao fikaonan-doha tetsy amin’ny Carlton Anosy ny mpanohitra mivondrona amin’ny vovonana RMDM (Rodoben’ny Mpanohitra ho an’ny Demokrasia eto Madagasikara), ivondronana antoko miisa 21. Nandritra ny lahateny fanokafana nataon’ny filohan’ny RMDM, Marc Ravalomanana no nanaovany teny fiaraha-miory amin’ireo fianakaviana izay namoy Havana sy fiombonan’alahelo amin’ireo izay very fanànana, ary indrindra voatery nandao ny toeram-ponenana noho ny loza mitranga. Nanao antso ho an’ny vahoaka Malagasy ihany koa ny tenany “mba hifanampy amin’ireo sahirana, ary hiaraka hanarina ireo fahasimbana izay misy any amin’ny toerana misy ny tsirairay any”, na eo aza ireo rafitra misy eto amin’ny firenena izay natokana hanao ny famonjena maika ireo tra-boina sy ireo niara-doza. Misy ihany koa ny rafim-panjakana natao hanarina haingana ireo fotodrafitr’asa simba, koa inoanay fa efa samy mandray ny andraikiny izy ireo.
Tontosa, androany, ny fametrahana samboady ny Ben'ny tanàna vaovao ny Kaominina ambonivohitra Antsirabe, Rasamimanana Honoré. Ny Minisitry ny serasera sy ny fifandraisana, Lalatiana Rakotondrazafy, no nisolotena ny fitondram-panjakana foibe nametraka azy tamin'izany toerana izany, notronin'ireo solombavambahoaka voafidy tato Vakinankaratra, ary isan'izany ny tompon-tanàna dia ny depiote Jean François Michel. Nambaran'ity farany fa « tsy hijerena loko politika ny fampandrosoana an'Antsirabe ka dia vonona hifanome tanana izy ireo ». Nankasitrahan'ny minisitra izany ary nambarany fa « Ben'ny tanàna mitovy fijery amin'ny mpitondra no misy izao ka tsy afaka hiala olana amin'izay izy ireo ». Ho fisantarana izany fiaraha-miasa izany dia nanolotra fiarabe mpitaona fako sy dabam-pako niisa folo, ho an’ny tanànan’Antsirabe, ny fanjakana foibe. (Jereo Sary Tohiny)
Notanterahina tetsy amin'ny Carlton Anosy ny fihaonamben'ny antoko politika AVI, na ny Asa Vita no Ifampitsarana, izay notarihin'i andramatoa Norbert Lala Ratsirahonana. Anisan'ny notsindrian'ny fihanambe fa tsy natao hialokalofan'ny jiolahy ny antoko AVI, ary mampanaja ny fanjakana tsara tantana. Nanamarika ihany koa fa ao anatin'ny fifanajana sy fanampiana ny fitondrana no ampandroso ny Firenena, fa tsy ny fifanaratsiana sy ny fanalana baraka, na anatin'ny tsikera lava. Nambaran'i Norbert Lala Ratsirahonana, tamin'ny lahateniny ihany koa fa tamin'izy nirotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena dia hanafoana ny fisakafoanana atao isan-taona sy ny 26 jona eny amin'ny lapa-panjakana no anisan'ny teniny tamin'izany, izay amin'izao fotoana hitondran'i Filoha Andry Rajoelina izao vao tanteraka.
Tontosa androany maraina ny famindram-pahefana teo amin-dRtoa Ranivombohangy Lalanirina filohan'ny delegasiona manokana nitantana ny Kaominina ambonivohitra Antsirabe, hatramin'ny naha any am-ponja ny Ben'ny tanàna Paul Razanakolona teo aloha, sy Rasamimanana Honoré Gabriel, Ben’ny tanàna vaovao. Avy amin'ny vovonana IRK ity Ben'ny tanàna vaovao ity, ary efa mpanolotsain’ny tanàna ihany teo aloha, na tsy dia tazana tamin'ny fivoriana ihany aza. Tsy vaovao amin'ny olana misy ao amin'ny Kaominina ny tenany, toy ny fanadiovana ny tanana, fanarenana ny fotodrafitr'asa isan-karazany, fa indrindra ny karaman'ny mpiasa izay tafakatra ho 12 volana no tsy voaloa, saingy nahavita 2 volana ny delegasiona manokana. Hatao ny sabotsy 25 janoary 2020 ny lanonana fametrahana samboady amin’ny Ben'ny tanàna vaovao. (Jereo Sary Tohiny)
Sary: Simon Noumenjanahary Fandrava
Vehivavy, Vola Andrianarivo no Ben’ny tanànan’ny Kaominina ambonivohitra Ambositra, nahavita ny taom-piasana farany Septambra 2015 – Janoary 2020. Vehivavy ihany koa, Haingo Nambinina, ny Ben'ny tanàna vaovao nivoaka mpandresy tamin’ny latsa-bato tamin’ny 27 novambra 2019. Tontosa androany ny fifamindram-pahefana teo amin’ny roa tonta, ary dia mandray ny asa maha Ben'ny tanànan’Ambositra azy Haingo Nambinina. (Jereo Sary Tohiny)
jeudi, 23 janvier 2020 14:56
Amoron'i Mania: Hatao rahampitso ny fametrahana ny samboadin'ireo Ben’ny tanàna rehetra
Hotanterahina eo Antampovinany-Ambositra ny zoma 24 janoary 2020 ny fametrahana ny samboadin'ireo Ben’ny tanàna rehetra voafidy tato amin'ny faritra Amoron'i Mania, tamin’ny fifidianana kaominaly natao ny 27 novambra 2019. Miisa 55 ireo Kaominina mandrafitra ny Faritra Amoron’i Mania, ny ao amin’ny Kaominina ambanivohitr’i Mahazoarivo, Distrikan’i Fandriana ihany no nodidian’ny Fitsarana misahana ny ady amin’ny fanjakana Fianarantsoa haverina ny fifidianana noho ny tsy fahatomombanana.